Tag: pasocial media gurus | Martech Zone
Tag: magariro enhau gurus
Chishanu, February 22, 2013 Chishanu, February 22, 2013 Douglas Karr
Muchikoro chepamusoro chemwanasikana wangu vaive nenzvimbo yaive inoera kuvakuru vanonzi "mukuru rug". Iyo "yepamusoro rug" yaive chikamu chakanakira chakavakirwa munzvimbo mune horo hombe dzechikoro chake chepamusoro uko vepamusoro kirasi vaigona kuturika. Hapana vatsva kana kirasi yejunior yaibvumidzwa pamubhedha wevakuru. Zvinonzwika zvinoreva, handizvo here? Mune dzidziso, inopa vakuru nehana yekugona uye kudada. Uye pamwe izvo
NeChishanu, Kurume 27, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ichi chipenga. Manyepo, kunyepa, kunyepa. Ini ndaneta kwazvo nekunzwa zvese zvekupenga zvekuti social media 'gurus' inotaurira vatengi. Nezuro husiku ndakaita iyo Tsananguro yeTwitter yakadzidziswa naLinda Fitzgerald neboka rake, Affiliated Women International. Iri boka rinoumbwa nevakadzi vane ruzivo, vane simba rebhizinesi. Mumashoko avo: Chiono chedu "kupa vakadzi simba pasi rese". Icho chinangwa ndechekufumisa, kukurudzira, uye kushongedza vakadzi nenzira inotungamira kune